चितवन जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर | Kendrabindu Nepal Online News
32420147 987815 7498234 23934098
चितवन जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर
३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०७:५७
चितवन जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर बनेको छ । यहाँ उत्पादित दूध आन्तरिक बजार पूरा गरी अन्य जिल्लामा पनि बिक्री हुने गरेको छ । उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत अन्य जिल्लामा बिक्री भइरहेको छ । पछिल्लो समय युवासमेत पशुपालनतर्फ आकर्षित भएपछि दूध उत्पादन ह्वात्तै बढेको छ ।
जिल्लामा दैनिक २ लाख ८९ हजार ३ सय ३९ लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसको १ लाख २४ हजार लिटर जिल्लामै खपत हुन्छ । कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको कार्यविधि अनुसार बुधबार चितवनलाई दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । मन्त्रालयले विश्व खाद्य संगठनले हरेक व्यक्तिलाई प्रतिदिन २ सय ५० मिलीलिटर दूध आवश्यक पर्ने नीति लिएको छ । यही अनुसार प्रतिव्यक्तिको आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन भएपछि आत्मनिर्भर भएको हो ।
प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ लिटर आवश्यक पर्नेमा जिल्लामा एक सय ७० लिटर उत्पादन हुन्छ । ३ महिनाको अध्ययन र अनुसन्धानपछि घोषणा गर्न लागिएको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. विजय श्रेष्ठले बताए । झण्डै २० हजार कृषक दूध उत्पादनमा लागेका छन् । यहाँ उत्पादित दूध काठमाडौं, हेटौंडा, पोखरा लगायत जिल्लामा बिक्री हुने गरेको छ ।
Prevअसार १ देखि उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा
कुलेखानी तेस्रोको विद्युत् उत्पादन एक साता भित्रैNext
दशैंमा गाडी किन्ने हो ? यस्ता छन् कम्पनीहरुका आ-आफ्नै अफर